Inona ireo antony tokony hanakaramana SEO matihanina?
Isan-taona, ny fitaovam-pitadiavana toa an'i Google, Bing na Yahoo dia manova ny votoatin'ny teknika sy algorithm amin'ny alàlan'ny fikarohana ao amin'ny tranonkala SERP. Ny ankamaroan'ny tompon'ny tranonkala dia tsy manam-potoana sy traikefa hanaraha-maso ny sehatry ny varotra dizitaly tsy tapaka. Izany no mahatonga azy ireo mandray fanapahan-kevitra hentitra hanofa mpikaroka SEO izay afaka manangana fanentanana hanatsarana ny tontolon'ny Internet. Noho izany, ny andalana faran'izay tsara amin'ny tranonkala fanatsarana ny tranonkala dia manentana ekipa SEO azo antoka sy za-draharaha. Raha mbola misalasala ianao raha te hanofa mpikaroka SEO iray na tsia, dia ireto antony manaraka ireto no hanampy anao hampiakatra ny sainao - bunter schmetterling logo name generator.
Ny antony voalohany hanolorana mpikaroka SEO iray za-draharaha
Fomba fitadiavana môtôa dia dingana mandany fotoana izay tsy azo tanterahina amin'ny sehatra iray. Amin'ny ankapobeny dia mitaky herinandro 4 ka hatramin'ny 6 ny fanatsarana ny tranonkala SEO rehetra ary aorian'izany dia ho afaka hanamarina ny vokatra tsara voalohany ianao. Mba hamoronana tetikady fanatsarana ny paikady, mila mandray anjara amin'ity dingana ity ianao amin'ny fotoana. Ny ankamaroan'ny tompony dia tsy manam-potoana firy hanolo-tena amin'ny seho SEO manontolo. Soa ihany, ny orinasa SEO azo itokisana dia manam-potoana sy traikefa mba hanomezana ny fampielezan-kevitry ny SEO ny fiheverana ilainy.
Raha efa mihoatra ny herintaona ny faritra misy anao ary tsy hitanao amin'ny voalohany na farafaharatsiny ao amin'ny pejin'ny pejy faharoa SERP, midika izany fa misy zavatra tsy mety amin'ny tranonkala fanatsarana. Mba hahomby dia tokony atao tsara ny fampielezan-tsindrim-peo fikarohana. Aza hadino ny fotoana ahafahanao miteraka fitarihana bebe kokoa ary mifandraisa amin'ny ekipa SEO hafa. Hanampy anao hanitsy ny fahadisoana ara-teknika sasany izy ireo ary hanatsara ny tranokalanao SEO. Ataovy azo antoka fa manakarama mpitsabo matihanina sy za-draharaha SEO ianao, izay afaka manome anao valiny sy portfolio azo antoka amin'ny tetik'asa mahomby. Raha tsy izany, dia mety handany vola sy fotoana ianao.
Mila manakarama orinasa SEO ianao satria fantatr'izy ireo ny fomba hahatonga ny tranonkala ho namana. Izy ireo no hanome anao ny tranokala najanony ary mora ampiasaina ny navigation. Amin'ny fanatsarana ny tranokalanao sy ny endrika hita maso, ianao dia hanintona mpanjifa maro kokoa ary hamadika azy ireo ho mpanjifa.
Google dia manavao tsy tapaka ny algorithms, ka ny orinasanao dia mila ekipa manam-pahaizana izay tafiditra ao anatin'ny fiovan'ny tsena nomerika rehetra ary hahatakatra ny fomba hampihetsi-po ireo fanovana ireo amin'ny tranonkalanao mba tsy hisian'ny fandaharana.
Ny mpitsabo SEO iray efa za-draharaha dia hanampy anao hijanona eo anatrehan'ny mpifaninana aminao. Miaraka amin'ireo mpampiasa maoderina manana fahafahana miditra amin'ny varotra an-tserasera sy serivisy an-tserasera, manam-pahaizana SEO tsara dia afaka manome antoka anao fa ny toerana misy anao dia mahasarika sy mahafa-po kokoa noho ny tsenan'ny rivotry ny orinasa.
Ny fividianana fikarohana mozika dia fomba fiasa mahomby raha toa ny vola rehetra hividiananao vola amin'ny alàlan'ny paositra. Izany no antony, aza mieritreritra ny hampiasa mpanentana SEO ho toy ny fandaniana, eritrereto izany ho toy ny tombotsoa azo raisina ho toy ny fanentanana fanatanjahan-tena araka izay ahafahanao mamorona fitarihana bebe kokoa ary izaho manamarina ny marika an-tserasera .